० प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनावको परिणाम कस्तो आउने सम्भावना छ ?
— यसपाली दलहरू गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका छन् । अझ ठूला दलहरूले नै गठबन्धन बनाएका छन् । दलहरू सिद्धान्तहीन गठबन्धन बनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस र राप्रपाको गठबन्धनमा कुनै तुक छैन । यो बेमेल गठबन्धन हो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन स्वार्थको गठबन्धन हो । माओवादीले निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । तर, एमालेको दस्तावेजमा त्यस्तो छैन । नेकपा एमालेले संविधान संशोधन नहुने भन्दै आएको छ । अर्को, कार्यकारी राष्ट्रपति पनि हुन नसक्ने एमालेले भन्दै आएको छ । खासमा ठूला दलहरू सत्ताका लागि लडिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्ने भनिरहेको छ । मधेशका मुद्दा सम्बोधन गर्छु भन्नु पनि धोका हो । अर्को, नेपाली कांग्रेसले समाजवादको स्थापना गर्ने भन्दै आएको छ । यो पनि धोका हो । दुई पार्टीको सत्ता प्राप्तिको गठबन्धन हो । जहाँसम्म मधेशकेन्द्रित दलको कुरा छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपाबीचको गठबन्धन पनि चुनावका लागि मात्र हो । जनताको दबाबमा यिनीहरूले चुनावी गठबन्धन गरेका हुन् । फोरम र राजपाको सिद्धान्तमा पनि भिन्नता छ । संघीय समाजवादी फोरम कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छ । राजपा संसद्बाट निर्वाचिन प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छ । फोरम र राजपाबीच पनि सिद्धान्तहीन गठबन्धन छ ।
० भनेपछि अहिलेका गठबन्धनहरू सबै चुनावका लागि मात्र हो ?
— मधेशी जनताको दबाबका कारण यिनीहरू गठबन्धन बनाउन बाध्य भए । स्थानीय चुनावमा फोरम नेपाल सभागिता जनायो । तर, राजपाले पहिलो र दोश्रो चरणको चुनाव बहिष्कार गरेको थियो । राजपा त्यसबेला धन्यवादको पात्र बन्यो । संविधान संशोधन विधेयक पास अथवा फेल भयो भने स्वीकार गर्ने राजपाको निष्कर्ष राम्रो थियो । नेकपा एमालेले ९० प्रतिशतको मतबाट संविधान जारी भएको दाबी गर्दै आएको थियो । तर, स्थानीय तहको चुनावमा ६४ प्रतिशत मत संविधानको विपक्षमा खसेको थियो । ३६ प्रतिशत जनताले मात्र संविधानको पक्षमा मत दिएका थिए । संविधान अल्पमतमा परिसक्यो ।
० हालै सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनावबाट संविधान संशोधन गराउने पक्षले अत्यधिक मत पाउने सम्भावना छ ?
— प्रदेश नम्बर २ मा मधेशी गठबन्धनकै बहुमत आउँछ । त्यसमा दुविधा छैन । पहाडको कुरा गर्ने हो भने नेकपा एमालेले राष्ट्रवादको नारा दिएर बहुमत ल्याउने सम्भावना छ । राष्ट्रवादको लहर रह्यो भने एमाले माओवादीका गठबन्धनले पहाडका जिल्लामा बढी मत ल्याउने सम्भावना छ । तर, पहाडका जनताले वामगठबन्धन धोका हो भन्ने महसुस गरे भने अत्यधिक मन नल्याउन पनि सक्छ । पहाडमा भन्दा मधेशमा कांग्रेसको बढी सिट आउँछ ।
० मत पाउनका लागि उम्मेदवारहरूले विभिन्न किसिमका मिठामिठा कुरा गर्छन् । विभिन्न किसिमका प्रतिबद्धता जनाउने गर्छन् । मतदाताले भने कस्ता उम्मेदवारहरू छनौट गर्दै छन् ?
— विगतमा दलहरूले निकाल्ने चुनावी घोषणापत्र जनताले खोजीखोजी पढ्थे । घोषणापत्रमा के के भन्ने कुरा जान्न जनतामा उत्सुकता देखिन्थ्यो । तर, अहिले आएर घोषणापत्र को पढ्छन् ? २०४८ देखि अहिलेसम्म कुन दलले आफ्नो घोषणापत्रअनुसार काम गरेका छन् ?
० भनेपछि अहिले दलहरूले घोषणापत्रअनुसार काम गर्न छाडे ?
० दल, व्यक्ति, जातिलगायत हो त अहिलेको घोषणापत्र ?
— होइन, होइन । त्यो होइन । धनको कुरा गर्नुस् । सबभन्दा ठूलो धन भएको छ । आफूलाई समाजवादी र साम्यवादी भन्ने नेकपा एमालेले समानुपातिकको मधेशी कोटामा मोती दुगडको नाम १ नम्बरमा राखेको छ । मोती दुगड समाजवादी हुन् ? नेपाली कांग्रेसले पनि आफूलाई समाजवादी भन्छ । विनोद चौधरी समाजवादी हुन् ? कुनै बेला विनोद चौधरी नेकपा एमालेको प्रिय पात्र थिए, तर अहिले कांग्रेसका प्रिय पात्र बनेका छन् ।
० दलहरूका घोषणापत्र पहिले जनताले पढ्थे । तर, अहिले पढ्न छाडे भनेपछि यसमा दोषी को ?
— नेता दोषी छन् ।
० घोषणापत्रमा लेखेको अनुसार दलहरूले काम गर्न छाडेपछि जनताले पनि घोषणापत्र पढ्न छाडेका हुन् ?
— हो । यसैको परिणामस्वरूप अहिले धन, जाति, क्षेत्रीयतालगायतको कुरा आइरहेका छन् । जनतालाई आफ्नो नेताप्रति विश्वास भएन । नेतालाई आफ्नो कार्यकर्ताप्रति विश्वास भएन । त्यसकारण उनीहरूले धनपतिहरूलाई ल्याएका छन् । यसपटक पनि गाउँगाउँमा पैसाका लागि होडबाजी चल्यो । निर्वाचन आयोगले रक्सी बेच्न पाइँदैन भन्छ । चुनावका बेला करोडौं रूपैयाँको रक्सी नै बिक्री भएको छ । सिद्धान्त कहाँ छ ?
० जनता जागरूक नभएर चुनावी विकृति देखिएको हो ?
— त्यो समय आउँदैछ । नेताहरूको जनताप्रतिको बेवास्ताको पराकाष्ठा नाघिसक्यो । अबको चुनावको परिणाम नयाँ किसिमको आउने छ ।
० त्यसो हो भने यसपालीको चुनावबाट सही नेता चुन्नुप¥यो नि ?
— हामीले २०४७ सालमा संविधानसभा र संघीयताका कुरा गरेका थियौं । आरंक्षण, नागरिकतालगायतका कुरा ग¥यौं । तर, मधेशी र पहाडीबीच द्घन्द निम्त्याउन खोजिएको भनेर मधेशी जनताले भन्न थाले । आज त्यही मधेशी जनता १० वर्षदेखि संघर्ष गरिरहेका छन् । एक सयभन्दा बढी मधेशीेले सहादत दिइसकेका छन् । यो समयको कुरा हो । समयअनुसार सबै कुरामा बदलाब आइरहेको छ ।
० पहिलेका भन्दा अहिलेको जनता जागरूक छन्, जसले सही नेता छनौट गर्न सकोस् ?
— जनता जागरूक छन् । तर, बाध्यता छ । जुन ठाउँमा कांग्रेसले गलत उम्मेदवार दिएको छ त्यो ठाउँमा एमालेले पनि मत पाउन सक्छ । मधेशवादीको कुरा त्यस्तै छ । जहाँ मधेशवादी दलले राम्रो उम्मेदवार दिएका छैनन् । ती ठाउँमा कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवार जित्न सक्छन् । जनतासँग बाध्यता हुन्छ । तर, यो बाध्यता विस्फोट भएपछि कुनै नयाँ नेतृत्वको जन्म हुन्छ ।
० यसपटकको चुनावबाट पनि पुराना नेताहरू नै चुनिने सम्भावना छन् ?
— ठूला नेताहरूको विकल्प नै तयार भएको छैन । त्यस्तो नेतृत्व नै पैदा भएको छैन ।
० यदि यसपटक पनि जनताले विशेष गरी पुरानै अनुहार चुन्छन् भने उनीहरूबाट चुनिने नेताहरूलाई कसरी गलत भन्न सकिन्छ ?
— नयाँ नेतृत्व नआएसम्म यस्तै भइरहन्छ । कुनै बेला भारतमा इन्दरा गाँधीलाई नै भारत भनिन्थ्यो । कुनै बेला सम्पूर्ण उत्तर भारतबाट कांग्रेस आई हरायो । अहिले भारतमा मोदीको राज छ । यसरी नयाँ नेतृत्व नआएसम्म यसरी नै चलिरहन्छ ।
० यसपालीको जनमतबाट संविधान संशोधन हुन्छ ?
— संविधान संशोधन हुने अवस्था म देख्दिनँ । जहाँसम्म नेपाली कांग्रेस र माओवादीका कुरा छ । २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान संघीयताविहीन जारी भएको थियो । २०६२ को जनआनदोलनको दस्तावेज वैशाख २५ गते सात दलले जारी गरेका थिए । तर, त्यसको विपरीत संविधान जारी गर्दा नेपाली कांग्रेस विपक्षमा गयो । माओवादीले विभिन्न जातीय राज्यको नारा दिएर हजारौं मानिसको हत्या गरायो । माओवादी पनि इमान्दार भइदिएको भए त्यसैबेला संघीयतासहितको संविधान आउथ्यो । पुष १० गते मधेश बन्द हुने थिएन । नेपालगञ्जको ठूलो घटना हुने थिएन । २०६३ पुष १० गते गरिएको मधेश बन्द मधेशी आकांक्षाको प्रतिक हो । त्यसबाट कांग्रेस र माओवादीले पाठ सिक्न सकेनन् । २०६३ माघ १ गते संघीयतासहितको अन्तरिम संविधान जारी हुन सक्थ्यो ।
० मधेशकेन्द्रित दलहरूको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
— पछिल्लो एक दशकदेखि मधेशकेन्द्रित दलले गर्दै आएको क्रियाकलापबाट सबै अवगत् छन् । यिनीहरू इमान्दार भइदिएको भए पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सक्थ्यो । अहिलेको चुनावको कुरा गर्ने हो भने फोरम र राजपाबीचको गठबन्धनलाई समर्थन गर्नु मधेशी जनताको बाध्यता छ । मधेशी जनतासँग विकल्प छैन । मधेशी जनताले मधेशवादी दललाई मत दिएनन् भने ठूला दलहरूलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले मधेशी जनता मधेशवादीलाई मत दिन बाध्य छन् ।
० फोरम र राजपाको गठबन्धन मधेशीको हितका लागि हो कि पार्टीगत हितका लागि हो ?
— मधेशी जनताको दबाब पनि थियो । बाध्यता पनि थियो । अहिले अलगै चुनाव लडेको भए दोश्रो संविधानसभा चुनावको जस्तो परिणाम आउन सक्थ्यो । हो, एउटा कुरा के हो भने मधेशकेन्द्रित दल पछिल्लो समय सुधारात्मक अवस्था छन् । स्थानीय तह तेश्रो चरणको चुनावले पनि यो कुरालाई प्रमाणित गरिसकेको छ ।
० यो चुनावमा कुन दलले कस्तो हैसियत बनाउलान् ?
— राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादको नारा दिने वामगठबन्धन नै ठूलो दल बन्ला जस्तो छ । एमालेको राष्ट्रवाद हाबी भयो पहाडमा उनीहरूको बढी मत आउनेछ । दोश्रो स्थानमा नेपाली कांग्रेस, प्रदेश नम्बर २ राजपा र फोरम पहिलो शक्ति बन्ने देखिन्छ ।